EPL: Liverpool oo ku soo laabatay kaalinta labaad ee horyaalka kaddib guul ay ka soo gaartay kooxda Middlesbrough, xilli uu labo jeer shabaqa soo taabtay Adam Lallana… + SAWIRRO – Gool FM
(Middlesbrough) 15 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa guul wayn ka soo gaartay naadiga Middlesbrough oo ay booqatay, iyadoo ku soo laabtay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, xilli labo jeer uu shabaqa soo taabtay Adam Lallana.
Liverpool ayaa goolka hore la timid 29’daqiiqo qeybtii hore ee ciyaarta waxaa karoos uu soo qaaday Nathaniel Clyne madax ugu dhaliyey Adam Lallana, kulanka ayaana lagu kala nastay Reds oo ku hoggaaminaysay 1-0.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Liverpool ayaa hoggaanka sii dheereysatay waxaana kubbad uu caawinteeda lahaa dhaliyaha goolkii koowaad ee Adam Lallana u dhaliyey 60’daqiiqo Divock Origi.
Kooxda Liverpool ayaana dhalisay goolka saddexaad ee kulankan waxaana u dhaliyey markale 68’daqiiqo Adam Lallana waxaana uu ahaa goolkiisii labaad ee kulankan, iyadoo uu ka caawiyey goolkan Divock Origi, kooxda Liverpool ayaana 3-0 uga adkaatay Middlesbrough.
Reds ayaa ku soo laabtay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League iyadoo 34-dhibcood la wadaagta kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Arsenal.
TOOS u daawo: Manchester City vs Watford - LIVE (Shaxda sugan)